Investiture du Président - Déclaration de M. Jean-Marc Ayrault (30 mars (...) - La France en Birmanie
Accueil > Actualités > Actualité en France > Investiture du Président - Déclaration de M. Jean-Marc Ayrault (30 mars (...)
Birmanie - Investiture du président – Déclaration de M.Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international (30 mars 2016)
Je salue le long et courageux combat mené par Mme Aung San Suu Kyi et tous ceux qui, à ses côtés, ont consenti à de nombreux sacrifices pour la démocratie et la liberté. Je lui adresse mes vœux de succès pour ses nouvelles fonctions et me réjouis qu’elle porte désormais officiellement la voix du peuple birman auprès de la communauté internationale.
Myanmar/ Burma – Inauguration of the President – Statement by Jean-Marc Ayrault, Minister of Foreign Affairs and International Development (March 30)
France offers its warm congratulations to Htin Kyaw, President of the Union of Myanmar ; to Aung San Suu Kyi for her appointment as minister of foreign affairs, education, electricity and energy, and as minister of the President’s Office ; and to the entire government on this inauguration day.
ပြင်သစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး နှင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီး Mr. Jean-Marc Ayrault ၏သတင်းထုတ်ပြန်ကြော်ငြာချက် (မတ်လ- ၃၀ ရက်နေ့ ၊ ၂၀၁၆-ခုနှစ်)
ယနေ့ ကတိသစ္စာပြုကြသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတဦးထင်ကျော် ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၊ ပညာရေး ၊ စွမ်းအင် နှင့် လျှပ်စစ် နှင့် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး တာဝန်များကိုတာဝန်ယူရန်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ရှည်လျှားပြီး ရဲစွမ်းသတ္တိ နှင့် ပြည့်စုံသော ဒီမိုကရေစီ နှင့် လွတ်လပ်မှု့ရရှိရေး အတွက် ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ထိုဆန္ဒမျိုးအတွက် သူမနှင့်အတူတကွ ပေးဆပ် ၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသူများကို ချီးကျူးအပ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုပ်ငန်း တာဝန်အသစ်များ အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံ တကာအသိုင်းအဝိုင်း အတွက် မြန်မာပြည်သူလူထု၏အသံကိုကိုယ်စားပြုပြီး ယခုအချိန်မှစတင်လျှက် တရားဝင်တာဝန် ထမ်းဆောင်တော့မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင် ရပါသည်။
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အဆင့်အသစ်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းလိုက်သည့် မြန်မာပြည်သူလူထု နှင့်အတူ ရပ်တည်လျှက်ရှိသည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံကြုံတွေ့နိုင်မည့် စိန်ခေါ်မှု့အသစ်များကို ဖြေရှင်းရာတွင် ထောက်ခံမှု့ပေးနိုင်ရန် အဆင်သင့်ရှိနေပါသည်။